Hiba Nuura oo si dareen leh uga hadashay geerida Cabdi Tahliil | Universal Somali TV
Fannaanadda weyn ee Soomaaliyeed, Hiba Maxamed Cudoon (Hiba Nuura) ayaa si tiiraanyo leh uga hadashay geerida ku timid Allaha u naxariistii hobolkii weynaa ee Soomaaliyeed, Cabdi Tahliil Warsame oo ku geeriyooday Magaalada Muqdisho.
Hiba Nuura oo muddo dheer ay fanka ku soo wada jireen Cabdi Tahliil Warsame ayaa sheegtay in ay ka naxday geerida ku timid.
Hiba Nuura oo la hadashay BBC ayaa tiri "Imikadaa aad i soo wacday baa Xamar la'iga soo wacay, meel kale la'iga soo wacay, meel kalana la'iga soo wacay. Afar telefoon baa igu kulmay. Cabdi muddaba dhul yaal buu ahaa, wuxuu ahaa nin adduunyada lagaga meyray dembiga oo dhan. Maalintiisii buu dhintay, maalin wanaagsan oo Jimco ah buu dhintay, dembi oo dhan ma laheynee."
"Ilaahay waxaan uga baryeynaa Casawajalaha ee ina abuurtay inuu Janada geeyo, Ilaahay inuu marti la jecelyahay ka dhigo."
"Ilaahow kitaabkiisa midigta ka sii, Ilaahow intuu dhalay, intii la dhalatay, anaga iyo umadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan naga sii. Walaahi tacsi baa is wada daba-taala, hadda afar tacsi oo kale oo laba Corona yihiin baa hadda igu korodhay. Anigoo dhan waan iska naxsanahay."
"Cabdi wuxuu ahaa nin wanaagsan oo Soomaali ah oo wadani ah. Markuu heesi jiray waxaad ka garaneysaa wadaniyadda heerkuu ka gaaray. Nin weliba wuxuu qaadaa ama uu sheegaa wuxuu dareensan yahay, buuna doon doontaa, marka nin Soomaali ah oo wadani ahoo, af gaaban, edeb leh oo dadka ammaan ka helo, oo yaqaana asxaabtinimada ayuu ahaa. Maanta adduunyadu wuu ka tagayee Janada Allaha geeyo, taasaa ugu muhiimsanee."
Kan-xigaTaliyaha Xoogga Dalka oo safar dhulka...
Kan-horeFannaankii weynaa Cabdi Tahliil Warsa...
54,017,240 unique visits